Rose of Sharon: မိသားစုအပန်းဖြေခရီး
Posted by rose of sharon at 2:30 PM
မိုးစက်အိမ် July 18, 2009 at 4:01 PM
ကောင်းတယ် အမရေ .. ခုလို မိသားစူ
အားလဲကျပါတယ် :P တူလေး တူမလေးတွေလဲ
ချစ်စရားလေးတွေ ဘဲဗျို.... ထာဝရ
kyalkalay July 18, 2009 at 4:46 PM
rose of sharon July 18, 2009 at 6:23 PM
မိုးစက်အိမ်နဲ့ကြယ်ကလေး လာလည်သွားတဲ့အတွက်ရော၊ ပေးသွားတဲ့ဆုတွေအတွက်ရော ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
စန္ဒကူးမေ July 18, 2009 at 7:06 PM
သားလေးက ဗိုက်ပူပူလေးနဲ့.. အသည်းယားလိုက်တာ..း)
စည်သူ July 18, 2009 at 10:00 PM
PAUK July 18, 2009 at 11:09 PM
Shinlay July 19, 2009 at 4:05 PM
Rose ရေ ပြန်ရောက်ပြီလား။ စာတွေဆက်ရေးဖို့အင်အား တွေရလာတာပေါ့။ သတိရနေတာ။ Pls say hello to your family.....
rose of sharon July 19, 2009 at 4:19 PM
ကျေးဇူးကူးကူးရေ.. အဲဒီဗိုက်ကတဝက်ကျပြီးသားဗိုက်....စည်သူရေ...မောင်လေးဆုတောင်းကြောင့်အမပျော်ရွှင်နေပါတယ်(ခင်မင်စွာဖြင့်)... Pauk ရေ...ပင်လန်းကမ်းခြေကသူမလိုက်မဖြစ်လို့လိုက်ရတာ..အမကရေကောင်းကောင်းမကူးတတ်လို့...ပြန်ရောက်ပြီရှင်လေးရေ.. ကျမလဲသတိရနေတာ... သူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြောင်းပြောပြလိုက်ပါ့မယ်.. အားလုံးကိုကျေးဇူး :)
sin dan lar July 19, 2009 at 8:30 PM
ဗိုက်နေရာမှာ အကျီင်္က ကျပ်နေတယ်.. ရယ်စရာလေး...။
Nge Naing July 19, 2009 at 11:27 PM
ခရီးထွက်တာ သိပ်ကို ၀ါသနာကြီးတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေမပေးလို့ မထွက်ဖြစ်ဘူး။ အဲဒီလို အပန်းဖြေခရီး ထွက်ချင်လိုက်တာ။
rose of sharon July 20, 2009 at 7:38 AM
ဟုတ်တယ်...sin dan lar, သူဘာဝတ်ဝတ် အဲဒီနားမှာအမြဲကျပ်နေတာ... ဟုတ်ကဲ့ငယ်နိုင်... အခြေအနေပေးလို့ခရီးထွက်ဖြစ်တဲ့တနေ့... ပြန်ပြောပြနော်... အားလုံးကိုကျေးဇူးး)
မျက်မှန်လေး July 20, 2009 at 10:40 AM
rose of sharon July 20, 2009 at 10:43 AM
ကြိုးစားမျက်မှန်လေးရေ... အားပေးတယ်... ဆုလဲတောင်းပေးမယ်... လာလည်တာကျေးဇူး :)
မီးမီးချစ် July 20, 2009 at 11:32 PM
နောက်လဲ မိသားစုလိုက် ပျော်စရာ ခရီးတွေ အများကြီး ထွက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်နော် ..
rose of sharon July 21, 2009 at 7:25 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မီးမီးချစ်လေး... နေကောင်းသွားပြီလား ? Take care. :)
မေလေး July 21, 2009 at 10:06 AM
မမတို့ မိသားစုဘဝလေးက အားကျစရာလေးနော်။
kiki July 21, 2009 at 10:24 AM
မိသားစုကို ဦးစားပေးတဲ့အိမ်ရှင်မကောင်း တဦး အဖြစ်နေရတဲ့ ဘဝလေး ။မိသားစု နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာ အားလပ်ရက်လေးတွေ အပန်းဖြေလို့ရတဲ့ ဘဝလေး ။ အတော် အေးချမ်း ပါတယ် နော် ...
သား နဲ့သမီး လေး တွေလည်း ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ် ။။
အစဉ်အမြဲ ချမ်းမြေ့ ပါစေ။
(ကော်မန့် ထဲမှ တဆင့် အလည် လာတာပါ ။ လာနှုတ်ဆက်တာ နောက်ကျသွားတယ် ။ ဆောရီး ပါ )
rose of sharon July 21, 2009 at 10:52 AM
ချစ်စရာကောင်းတဲ့မေလေး... စကာင်္ပူလာရင်ချက်ကျွေးမယ်ဆိုလို့ချက်ချင်းကိုပြေးလာချင်စိတ် ပေါက်သွားတယ်... လာရင်ပြောမယ်နော်... လာလည်သွားတာကျေးဇူး...စာရေးကောင်းတဲ့Kiki ကျမဆီလာလည်သွားတာအရမ်းကို ဝမ်းသာမိပါတယ်... ဆုတောင်းပေးသွားတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အိမ်ချမ်း July 22, 2009 at 7:18 AM
rose of sharon July 22, 2009 at 9:37 AM
Anonymous July 22, 2009 at 9:44 PM
Where is the gift for me, Aunty?????
rose of sharon July 23, 2009 at 8:41 AM
rose of sharon July 23, 2009 at 8:44 AM
Sorry Craton, there's nothing to buy because it'saprivate beach, no souvenir shop around, maybe next time,don't be sad. :D